W K – Shwe Likes
Author: W K
By W KPosted on September 19, 2019 September 19, 2019
လူတွေ ရဲ့ လောဘဇောတွေ က အဆုံး သတ်လို့ မရပါဘူး ။ သူတို့လိုချင်တာ ရဖို့ဆိုရင် မျက်မမြင်ဖြစ်ဖြစ်၊ မဖြစ်ဖြစ် အလကားရရင် အကုန် ကို ယူတာပါ။ အခုလည်း ထိုင်းနိုင်ငံက မျက်မမြင်အဖွားတစ်ယောက် ရဲ့ >>> ဆက်လက်ဖတ်ရှုရန်
ရွှေညောင်မြို့ တွင် ( ၄ ) နှစ် အရွယ် ကလေးငယ် ( ၁၃ )နှစ် အရွယ် လူငယ် မှ သားမယားနှစ်ကြိမ်ပြုကျင့် ” နေအိမ် အောက်ထပ် ၌ ဆော့ကစားနေစဉ် >>> ဆက်လက်ဖတ်ရှုရန်
” ဘူတာရုံ သရဲ ” လွန်ခဲ့တဲ့ အနှစ်သုံးဆယ် ၊ ကျနော့အသက် ဆယ့်လေး ၊ ဆယ့်ငါးလောက်မှာ ကျနော်က မီးရထား ဘူတာရုံနဲ့ ဓါတ်တိုင်ဆယ်တိုင်စာလောက်ဝေးတဲ့ နေရာမှာ နေပါတယ် ။ ဘူတာရုံ ရဲ့ >>> ဆက်လက်ဖတ်ရှုရန်
” ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ပြော တဲ့… “ ညီညီ ညွှတ်ညွှတ် နေကြပါ ” ဆို တာ …” “” ညီညီညွတ်ညွတ်နေကြ ပါ ။ တစ်ယောက် နဲ့ တယောက် မနာလို >>> ဆက်လက်ဖတ်ရှုရန်
” ရင်သွေးလေးတွေ ကို သတိပေးထားပါ ” CoCa Cola (ကိုလာ) နှင့် ပူရှိန်း ” လုံးဝမတည့်် “
” ရင်သွေးလေးတွေ ကို သတိပေးထားပါ ” CoCa Cola (ကိုလာ) နှင့် ပူရှိန်း ” လုံးဝမတည့်် ” သတိ အန္တရယ်ရှိသည်… ဒီနေ့ သားကြီးကျောင်းကြိုရင်းအပြန်မှာ ဖေဖေ c o >>> ဆက်လက်ဖတ်ရှုရန်
ဦးသန့် ရေးခဲ့သော …“ သူငယ်နာ မစင်သေးသော ကျနော်တို့လူမျိုး ”…
လွန် ခဲ့သော နှစ်ပေါင်း ( ၅၀ ) ခန့် က ဦးသန့် ရေးခဲ့သောစာ ဖြစ် ပါ သည် ။ Oh! We Burmans by Maung Thant >>> ဆက်လက်ဖတ်ရှုရန်
” ဖား ကန့်မြို့နယ်ထဲသို့ ကောင်းကင်ပေါ်က ပြုတ်ကျတဲ့ အမည်မသိအရာဝတ္ထု ရဲ့ ဖြစ် ရပ် မှန် “
” ဖား ကန့်မြို့နယ်ထဲသို့ ကောင်းကင်ပေါ်က ပြုတ်ကျတဲ့ အမည်မသိအရာဝတ္ထု ရဲ့ ဖြစ် ရပ် မှန် ” ဒီနေ့ နေ့လယ် ( ၁ ) နာရီ မိနစ် (၂၀) ခန့်က >>> ဆက်လက်ဖတ်ရှုရန်
” ဧရာဝတီမြေပဲဆီ စက်ပိုင် သူဌေး ကိုယ်တိုင် ရေးထား တဲ့ မြန်မာပြည်က ပဲဆီများအခြေအနေ “
ဧရာဝတီ မြေပဲဆီ စက်ပိုင်သူဌေးကိုယ်တိုင်ရေးတာ ပါနော်…. ရေးသင့်ပြီထင်လို့ရေး လိုက်ရပါတယ် ခင်ဗျာ ။ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ စားသုံးဆီလောက ထဲကို ဓာတုအနံ့ မြေပဲဆီ၊နှမ်းဆီရောက်တာ 2012/13 ခုနှစ်ကတည်းကပါ။ တရုတ်နိုင်ငံသားလူငယ်တယောက်ဘာသာပြန်နဲ့အတူ အိမ်ရောက်လာပြီးနမူနာ ပုလင်းလေးတွေပြပြီး ရှင်းပြ ပါတယ်။ >>> ဆက်လက်ဖတ်ရှုရန်
” ပဲဆီ လို့ ဗူးပေါ် ရေးထားပြီး ပဲဆီမဟုတ်သည့်တံဆိပ်များ ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနထုတ်ပြန် “
” ပဲဆီ လို့ ဗူးပေါ် ရေးထားပြီး ပဲဆီမဟုတ်သည့်တံဆိပ်များ ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနထုတ်ပြန် ” မြေပဲဆီလို့ဖော်ပြပြီး မြေပဲဆီစစ်စစ် မဟုတ်ဘဲ စားအုန်းဆီနှင့်အခြားစားသုံးဆီတွေ ရောနှောထုတ်ဝေခဲ့တာကြောင့် ဖော်ပြချက်နှင့်ကိုက်ညီမှုမရှိသည့် စံမညီစားသုံးဆီ ကုန်အမှတ်တံဆိပ်တွေကို ဈေးကွက် မှ အမြန်ဆုံး ပြန်လည်ရုတ်သိမ်းဖို့ >>> ဆက်လက်ဖတ်ရှုရန်